Puntland oo ku Hanjabtay in ay la wareegi doonto Gobalka Sool. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAPuntland oo ku Hanjabtay in ay la wareegi doonto Gobalka Sool.
Puntland oo ku Hanjabtay in ay la wareegi doonto Gobalka Sool.
November 26, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Puntland oo ku Hanjabtay in ay la wareegi doonto Gobalka Sool.
Cabdiraxman Abuubakar Geelle Guddoomiyaha Gobolka Sool ee Maamulka Puntland oo la hadlay Warqaat.Com ayaa sheegay in Shacabka ku nool Magalada laas-Caanood ay ka hor-istaageen Madaxweynaha soomaaliland in uu galo Magaaladaasi.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Dhawaan ay Gacanta ku dhigeen doonaan guud ahaan Gobalka Sool, isagoona ku hanjabay in dagaal kula wareegi doonaan gobalkaasi.
Arintan ayaa waxaa uu ku sheegay Gudoomiyaha in ay hada wadaan, islamarkaana ciidamo badan ay geeyeen deegaanada ka tirsan Gobalka Sool.
Sidoo kale Gudoomiyaha Gobalka Sool ayaa Waxa uu sheegay in Madaxweynaha Soomaaliland uu xirnaa Jaakad bir ah marka uu imaanayay Magaalada Laasacaanood.
Puntland iyo Soomaaliland ayaa waxaa ay isku hayaan deegaanka Tukeraq ee Gobalka Sool, iyadoona dhowr jeer ay ku dagaalameen
Shabaab oo sheegtay in ay dileen Wadaadkii heystay goobtii la weeraray Gaalkacyo
SAWIRRO:- Weerarkii Ka dhacay Gaalkacyo oo la soo afjaray iyo khasaaraha rasmiga ah.
1,276,779 total views, 5,047 views today
1,276,779 total views, 5,047 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
1,276,637 total views, 5,045 views today
1,276,637 total views, 5,045 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
1,276,657 total views, 5,046 views today
1,276,657 total views, 5,046 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
1,276,608 total views, 5,040 views today
1,276,608 total views, 5,040 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
1,276,555 total views, 5,040 views today
1,276,555 total views, 5,040 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]